Isimo sezulu sasePortugal: izici, amazinga okushisa nemvula | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngakho Isimo sezulu sasePortugal. Ukuba yindawo ethonywe i-Atlantic Ocean, inesimo sezulu esimnandi esipholile. Kuyabanda futhi kunemvula ethe xaxa enyakatho, kepha kancane kancane kuyafudumala futhi kushise ilanga njengoba uya eningizimu. Eningizimu eyedlulele sine-Algarve enesimo sezulu esomile futhi esishisayo.
Kulesi sihloko sizokutshela ngazo zonke izici nokuhlukahluka kwesimo sezulu sasePortugal.
2 Ubusika nehlobo esimweni sezulu sasePortugal
3 Umehluko sezulu ePortugal enyakatho naseningizimu
Enye yezinto ezimbi ezigqamayo ngendawo yokwehluka kwesimo sezulu uma usengxenyeni esenyakatho noma engxenyeni eseningizimu. Ezindaweni eziphakathi nezwe eduze komngcele neSpain kuba isimo sezulu sezwekazi elithile. Engxenyeni emaphakathi nasenyakatho kunezintaba ezithile eziguqula isimo sezulu. ISierra de la Estrella ingashushunwa ebusika njengoba amazinga okushisa ehla aze agcwale iqhwa.
Uma sikhuluma ngelanga esimweni sezulu sasePortugal siyabona ukuthi libalele yonke indawo ehlobo. Kule sizini iPortugal ivikelwe yi-Azores anticyclone. Kodwa-ke, kwezinye izikhathi sithola umsila wokuphazamiseka kwe-Atlantic odlula engxenyeni esenyakatho futhi udale isimo sezulu esibi. Phakathi nawo wonke unyaka imvula ayishodi ngenxa yokuthi zivame kakhulu futhi ziningi njengoba siqhubeka engxenyeni esenyakatho. Ngalesi sizathu sibona ingxenye yasenyakatho iluhlaza kakhulu futhi kancane kancane iba ukoma njengoba siya eningizimu.
I-Algarve yindawo eyomile nenekhwalithi kuyo yonke iPortugal. Imvula yaminyaka yonke, efinyelela ku-1.450 mm eBraga naku-1.100 mm ePorto, ifinyelela cishe ku-900 mm eCoimbra, 700 mm eLisbon, bese yehlela cishe ku-500 mm e-Algarve. Isikhathi semvula kakhulu ebusika.
Ubusika nehlobo esimweni sezulu sasePortugal
Ake sibone ukuthi yiziphi izici zobusika nehlobo kwisimo sezulu sasePortugal. Ubusika bumnene emaphethelweni nasezindaweni ezisenyakatho kusukela izinga lokushisa elijwayelekile ngoJanuwari lisuka kuma-9.5 degrees ePorto, laya ku-11,5 ° C eLisbon, laya ku-12 ° C eFaro. Ebusika kunezikhathi ezinezulu elihle kwazise i-Azores anticyclone ingafinyelela ezweni kule sizini. Kodwa-ke, sithola namagagasi esimo sezulu esibi, imvula nomoya. Umoya uvamise ukuvunguza ngamandla amakhulu ovela esibhokweni, ikakhulukazi kusuka endaweni esenyakatho.
Isimo sePortugal maqondana nolwandle siqinisekisa isiphephelo esihle emisakazweni ebandayo nasemakhazeni asebusuku. Empeleni, kuyaqabukela kakhulu ukuthi kube khona imisinga ebandayo enjalo. Irekhodi lamazinga okushisa ogwini amadigri ambalwa ngaphansi kuka-zero enyakatho naseduze kwama-zero degrees eningizimu. Ngakolunye uhlangothi, endaweni yangaphakathi ibhuleki lishuba kakhulu njengoba kuyisimo sezulu sezwekazi. Kunezindawo zamagquma nezintaba lapho kwesinye isikhathi zivame ukuhola.
Mayelana nehlobo, sinezinsuku ezishisayo yonke indawo lapho kunesimo sezulu esipholile noma esipholile futhi nogu olusenyakatho futhi olufudumele ezindaweni ezimaphakathi naseningizimu. Kwezinye izindawo namazinga okushisa aphakathi nendawo angama-21 degrees, njengoba kunjalo ngePorto, lapho sithola khona ubukhulu bezinsuku ezingama-25 degrees. Ezindaweni ezivezwa kakhulu yimimoya yasolwandle, imvamisa kuyabanda futhi nasehlobo. Ugu lwe-Algarve luvikelwe kakhulu futhi lunamazinga okushisa afana nalawo aseLisbon. Ukushisa kuya ngokuya kuba namandla ezindaweni ezingaphakathi ikakhulukazi ezindaweni ezimaphakathi neziseningizimu emathafeni nasezigodini. Kunezinsuku ezithile ezingahle zibe namandla futhi amazinga okushisa akhule ngokuphawulekayo.
Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi yonke iPortugal ithinteka ngamagagasi okushisa avela e-Afrika. Kwezinye izimo singathola amazinga okushisa we kuze kufike kuma-degree angama-37 ogwini, ngenkathi ezindaweni ezisenkabeni yezwe kungadlula ama-degree angama-40.
Ngokuqondene nezindawo eziphakathi, ziyabanda enyakatho futhi zipholile eningizimu. Lapha izimvula zivame kakhulu, ikakhulukazi enyakatho lapho kuvame ukubanda kancane.
Umehluko sezulu ePortugal enyakatho naseningizimu
Sizobona ukuthi yini umehluko wesimo sezulu sasePortugal uma siya engxenyeni esenyakatho noma engxenyeni eseningizimu.
Ingxenye esenyakatho iba nezimvula eziningi kakhulu ngesikhathi sasebusika, kanti ehlobo ziyivelakancane futhi ziyindlala. Engxenyeni esenyakatho kakhulu yogu, sinolwandle olupholile ngisho nasehlobo. Kwezinye izindawo, ingafinyelela kuma-degree ayi-18 ngenyanga kaJulayi. Mayelana nezindawo ezisenyakatho zangaphakathi, ubusika buya ngokubandayo, ikakhulukazi njengoba sandisa ukuphakama. Ukuphakama kuyakhuphuka njalo lapho sisuka olwandle kuze kube sezingeni elingathatha.
Ingxenye etholakala enyakatho-ntshonalanga eyeqile ihambisana neBragança. Itholakala endaweni ephakeme ngamamitha angu-700 ngaphezu kogu lolwandle futhi inezikhathi ezibandayo kakhulu. Lapha amazinga okushisa angafinyelela ezingeni eliphansi elingu -10 degrees. Ihlobo liyashisa futhi libalele, ngisho noma ubusuku bupholile. Kwesinye isikhathi ngibona ukushisa okuncane lapha. Ngaphandle kwendawo eseningizimu, enyakatho-mpumalanga yeCoimbra sinezintaba ezifinyelela phezulu ngamamitha ayi-1.993. Lapha amazinga okushisa angaba cishe -15 / -20 degrees.
Umthamo wesikhungo naseningizimu sinobusika obupholile ngokwengeziwe nokuphazamiseka okuvela e-Atlantic Ocean. Lokhu kuphazamiseka kwenzeka kaningi futhi nezinsuku ezinomoya nazo azivamile. Ihlobo lifudumele, kepha hhayi ogwini umoya weDon Ocean uzizwa uhle kakhulu ehlobo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesimo sezulu sePortugal kanye nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Isimo sezulu sasePortugal